China SL 3D printy-3DSL-450S Manufacturer sy Supplier | Digital Manufacturing
SL 3D printy-3DSL-450S
Ny faharoa taranaka 3DSL mpanonta-S andian-dahatsoratra
Max manaova boky: 450 * 450 * 330 (MG) (Standard 330mm, halalin'ny resin tanky Tailor mety ho atao).
Amin'ny replaceable resin tanky.
Max vokatra: 120g / h
Resin faharetana: 10kg
RP fampidirana teknolojia
Rapid Prototyping (RP) dia orinasa mpamokatra entana teknolojia vaovao izay nampahafantarina voalohany avy any Etazonia tamin'ny faramparan'ny 1980. Ny ankehitriny mampiditra zava-bita ara-tsiansa sy ny teknolojia toy ny CAD teknolojia, isa teknolojia fanaraha-maso, ny teknolojia sy ny ara-nofo tamin'ny laser teknolojia, ary dia ampahany manan-danja amin'ny orinasa mpamokatra entana, mandroso ny teknolojia. Tsy toy ny fomba nentim-paharazana fanapahana, prototyping haingana mampiasa ny famoronana rafitra izay fitaovana sosona no superimposed ny milina iray anjara amin'ny lafiny telo-nitranga fahiny. Voalohany indrindra, ny rindrambaiko layering slices ny CAD rafitsary ny ampahany araka ny hatevin'ny sosona iray, ary mahazo ny andian-contour vaovao. Ny mamorona lohan'ny haingana prototyping milina dia fehezin'ny fanaraha-maso ny rafitra araka ny roa amin'ny lafiny contour vaovao. Nanamafy na lotika hanangana mahia sosona ny fizarana isan-karazany, ary ho azy superimposed ho telo-amin'ny lafiny fikambanana
Additive orinasa mpamokatra entana
Tsy toy ny nentim-paharazana reductive orinasa mpamokatra entana, RP mampiasa ny sosona-by-sosona fanangonan-karena ara-nofo ny fomba fandraisana mafy modely, araka izany koa no antsoina koa hoe Additive Manufacturing, (AM) na ny sosona Manufacturing Technology, (LMT).
Toetra mampiavaka ny RP teknika
H ighly malefaka, dia afaka mamokatra misy 3D mafy modely misy rafitra sarotra, ary ao anatin'ny masonkarena dia saika tsy miankina ny pitsiny ny vokatra.
C AD modely mivantana mitondra fiara, ny koronosy dizitaly dingana tanteraka, tsy misy fitaovana manokana e na dia ilaina, ary ny famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana, (CAD / CAM) dia tena Integrated.
H igh marina, ± 0.1%
H ighly reductive, ka vitany ny manao tsara be tsipiriany no maivam-boa rindrina
M antitra surface dia tsara kalitao
F ast haingana
H ighly automated: ny dingana automated tanteraka, ny dingana tsy misy olombelona dia mitaky fidirana an-tsehatry, ary ny fitaovana dia afaka ny ho nikarakara
Fampiharana ny RP teknolojia
RP dia be ny teknolojia ampiasaina ao amin'ny faritra:
Modely (Conceptualization & Presentation):
Industrial drafitr'Andriamanitra, ny foto-kevitra mafy ny fidirana amin'ny vokatra, ny famerenana amin'ny laoniny ny famolavolana foto-kevitra, Fampirantiana, sns.
Prototypes (Design, Analysis, Verification & pitsapana):
Design fanamarinana sy ny fanadihadiana, Design repeatability sy ny Optimization etc.
Lamina / Parts (faharoa koronosy & Mandatsaka asan'ny fanahy & madinika-be famokarana):
Vacuum tsindrona (silicone lasitra), Low tsindry tsindrona (sisiny, epoxy bobongolo) sns
Fampiharana dingan'ny RP
Ny dingana fampiharana dia afaka manomboka na avy amin'ny zavatra, sary 2D na hevitra iray fotsiny. Raha toa ilay zavatra ihany no misy, ny dingana voalohany dia ny banjino ny zavatra mba hahazo ny CAD antontan-kevitra, mankanesa any revese engineeing dingana na fanitsiana na fanovana fotsiny ary avy eo dia manomboka ny dingana RP.
Raha sary 2D na misy hevitra, dia tokony handeha ho any 3D modeling fomba fampiasana ny rindrambaiko manokana, ary avy eo mandehana any amin'ny dingana prining 3D.
Taorian'ny dingana RP, dia afaka mahazo ny mafy modely ho an'ny Functional fitsapana, fitsapana fivoriambe na any amin'ny hafa ny fomba narendrika nanaovana araka ny tena ilain'ny mpanjifa.
Fampidirana ny teknolojia SL
Ny anarana hoe stereolithography an-toerana, fantatra koa amin'ny hoe nanasitrana tamin'ny laser prototyping haingana. Ny toro lalana dia: ny tamin'ny laser dia mifantoka teo ambonin'ny ny rano photosensitive resin sy scanned araka ny hazo fijaliana-sectional endrika ny ampahany, ka izany no fantenana sitrana, amin'ny fotoana, mba hamaritana ny ambony, mba hamita ny fanasitranana ny iray sosona, ary avy eo ny fanandratako sehatra dia nampidinina ny hatevin'ny sosona iray, ary recoated vaovao resin sosona iray, ary nahasitrana azy rehetra tamin'ny laser mandra-modely mafy dia niforona.
Tombony amin'ny 2 taranaka SL 3D Printers ny SHDM
H igh fahombiazana, ary ny hafainganam-pandeha ambony indrindra dia afaka tonga400g / hsy ny mamokatra tamin'ny 24 ora dia afaka reach10kg.
L arge manaova boky, misy habeny dia360 * 360 * 300 (mm), 450 * 450 * 330 (mm), 600 * 600 * 400 (mm), 800 * 800 * 550 (mm), ary ny hafa koa namboarina manaova boky.
M aterial fampisehoana dia mora vidy, ary be kokoa eo amin'ny lafiny hery, fikirizana sy ny hafanana avo-fanoherana, mety ho injeniera fangatahana.
O bviously kokoa amin'ny fametrahana mazava tsara ny habe sy ny fahamarinan-toerana.
M ultiple faritra dia azo tsaboina amin'ny fotoana eo amin'ny fanaraha-maso ny rindrambaiko ary tsy misy faritra tena tonga lafatra-composant ny asa.
S uitable ho an'ny famokarana kely batch.
U nique akaniny resin teknolojia ny fiara mifono vy amin'ny boky hafa, 1 kg resin azo pirinty, izay tena mety ho ny fikarohana sy ny fampandrosoana.
R eplaceable resin tanky, resin hafa dia azo ovaina mora foana.
Replaceable resin tanky
Ihany no mitarika sy manosika avy ao, dia afaka resin pirinty hafa.
Resin fitoeran-tsoliky ny 3DSL andian-dahatsoratra dia miovaova (Raha tsy 3DSL-800). Fa ny 3DSL-360 mpanonta, ny resin fitoeran-tsoliky ny amin'ny hevitry ny fomba vatasarihana, rehefa resin fanoloana ny tanky, dia ilaina ny hampidina ny fitoeran-tsoliky resin ka hatrany ambany ka hanandratra hidin-trano roa haza, ary hanaisotra ny resin tanky avy. Pour resin vaovao rehefa avy manadio resin tanky tsara, ary avy eo dia hanandratra ny hidin-trano haza ka manosika ny fitoeran-tsoliky resin ho any amin'ny mpanonta sy manidy tsara.
3DSL-450 sy 600 3DSL ny amin'ny hevitry ny tanky resin mitovy rafitra. Misy 4 trundles amin'ny ambany ny resin tanky mba hanamora ny manongotra ka nanosika in.
Optical system-Mahery mafy tamin'ny laser
3DSL andian-dahatsoratra SL 3D mpanonta mandany ny avo fitaovana mahery vaika tamin'ny laser mafy orina ny 3w sy mitohy Output halavan'ny onja dia 355nm. Output hery 200mw-350mw, ny rivotra sy ny rano hihena dia hihena tsy voatery.
(4). Andry Expander
High fahombiazana Galvanometer
Max scanning hafainganam-pandehany: 10000mm / s
Galvanometer dia manokana savily maotera, ny fototra teoria dia mitovy tahaka ny amin'izao fotoana izao metatra, rehefa nisy amin'izao fotoana mandalo ny coil, ny Fanodina dia manalavitra iray fiolahana sy ny deflection zoro no mitanila ny amin'izao fotoana izao . Ary ny galvanometer dia antsoina koa hoe galvanometer scanner. Roa mitsangana nametraka galvanometer endrika roa scanning lalana ny X sy Y.
Mamokatra fitsapana-fiara maotera andian-tsoratra
Naka fanahy anjara dia fiara maotera andian-tsoratra, Fizarana haben'ny: 165mm × 123mm × 98.6mm
Fizarana boky: 416cm³, Print 12 farantsa tamin'izany andro izany
Total lanjany dia mikasika ny 6500g, hateviny: 0.1mm, Strickle hafainganam-pandeha: 50mm / s,
Mila 23 ora hahatapaka, eo ho eo 282g / h
Mamokatra test- kiraro faladianao
SL printy 3D: 3DSL-600Hi
Pirinty 26 kiraro faladianao tamin'izany andro izany.
Mila 24 ora ny mahavita
55 min eo ho eo ho an'ny kiraro iray irery
Slå 3D printy
SL printy 3D 3DSL-360S
Voarafitra mazava 3D scanner-3DSS-MIRG-III
Voarafitra mazava 3D scanner-3DSS-MINI-III